Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 2 - Blockchain Izindaba
Cryptotrader uPetru McCormack ihlaziye isimo mfihlo emakethe futhi wafinyelela isiphetho abaningi mfihlo abathanda entsha ukuza emakethe ngokuqiniseka okuphelele ukuthi uzokwazi ngokushesha ukuceba. Ngokusho McCormack, lokhu kuholela hhayi nje kuphela ekudumazekeni, kodwa futhi ukulahlekelwa okusheshayo izimali.
Ngokwemvelo, lapho emakethe ihlangabezana isikhathi Take-off, abatshali bezimali abaningi entsha eza ke, enethemba lokuthi i inzuzo lula. Ngaphezu kwalokho, babhala ngayo kuzo zonke izindaba, futhi kulabo abafuna ukuba uthola iholo omuhle, niyikhulume zempumelelo zabo. Kodwa Bubbles zizalwa: kwenzeka nge bubble dot-com, futhi kwaba okufanayo 2008 bubble izindlu.
Nokho, mfihlo emakethe akusebenzi ngaphansi scheme osheshayo Amaholo. Lena emakethe zokucabangela, lapho abanye abadlali bakwazi ngokushesha ukuceba. Abaningi basheshe balahlekelwa yikho konke izimali zabo. Crypto emakethe, njenganoma iyiphi enye emakethe, kuyinto cyclical, okusho ukuthi ngemva kwesikhathi ukukhula, isikhathi ekwindla ngeke nakanjani. Njengoba kwenzeka 2013: on the schedule jikelele Cryptology, le nkathi libukeka isikhashana zokukhula encane, ngemva kwalokho kube khona iconsi ongabalulekile.
Nokho, Empeleni, ngo-November 2013 wetimali ka mfihlo emakethe yavuleka ngokumelene okwenza ukufika abadlali abasha atshalwe bitcoin – the wamavukelambuso imali entsha Ngokuzayo. Ngakho, ngu-December 4, 2013 lesi sibalo safinyelela esiphezulu saso sokuqala $ 15.7 bhiliyoni. Futhi ngo-December 19, ofeleba kwehle kakhulu cishe esikabili – ukuze $ 6.9 bhiliyoni. Crypto emakethe wathatha iminyaka engaphezu kwemibili sokusukuma futhi sifinyelele highs esidlule.
Lesi simo ingaphinda, yize namuhla emakethe ngoba lwemali mfihlo sehluke kakhulu kulokho sibonile 2013: abadlali ukwaziswa okwengeziwe kuso, futhi semvelo ngokushesha ukuthuthukisa nokuthola izindlela ezintsha. Noma kunjalo, lena emakethe zokucabangela ezingaba igoqe nganoma yisiphi isikhathi. Kunjalo, zikhona izibonelo zendlela ungathola ocebile okusheshayo kuso, Nokho, amathuba bokulahlekelwa ukutshalwa ngenxa kahle amasu lohleliwe wokusisa izikhathi eziningi ephakeme.
Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 1 Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 3
I-New York Stock Excha ...
Thumela Previous:Emaphutheni Сrypto Zimali. Iphutha 1
Thumela Landelayo:Emaphutheni Crypto Zimali. Iphutha 3